डा.केसीको मागप्रति आवासीय चिकित्सकको ऐक्यबद्धता, संघर्षमा उत्रिए चिकित्साशिक्षा विद्यार्थी – Health Post Nepal
२०७६ कार्तिक २६ गते १०:२९
चिकित्साशिक्षा सुधारसम्बन्धी माग राखेर ९ दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेको अभियान्ता डा. गोविन्द केसीका मागप्रति सरकारका तीन ठूला प्रतिष्ठानका आवासीय चिकित्सकहरुले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, रेजिडेन्ट डक्टर्स एशोसिएसन अफ न्याम्स, वीर अस्पताल र राष्ट्रिय आवासीय चिकित्सक संघले संयुक्त रुपमा विज्ञाप्ति जारी गरि डा. केसीको माग पूरा गर्न सरकारले देखाएको उदासिनताप्रति आक्रोश व्यक्त गरिएको छ ।
आवासीय चिकित्सकहरुका तीनै संस्थाका अध्यक्षले संयुक्त हस्ताक्षर गरेको विज्ञाप्तिमा निस्वार्थ सत्याग्रहमा सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सको साथ समर्थन र ऐक्यवद्धता यसपटक पनि रहने उल्लेख छ । उनीहरुले डा. मागलाई यथाशीघ्र संवोधन गरेर जीवन रक्षाको पहल गर्न जोडदार मागसमेत गरेका छन् । त्यसैगरी कलेजका मनपरीविरुद्ध संघर्षका लागि गठित चिकित्साशिक्षा संघर्ष समिति समर्थित विद्यार्थीहरुले चितवन, बीरगञ्ज, पोखरालगायतका स्थानमा दैनिकजसो प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।
डा. केसीले केहीअघि मात्रै अवकास पाएको त्रिवि अन्तर्गतको चिकित्सा क्याम्पसका विद्यार्थीले मंगलबारदेखि सम्पूर्ण टिचिङ अस्पताल सदैव डा. केसीको साथमा भन्ने मुल नाराका साथ वृहत र्यालीसहित बालुवाटार जाने कार्यक्रम तय गरेका छन् । विद्यार्थीहरुले महारजगञ्ज क्याम्सपको शैक्षिक कार्यक्रम बहिष्कार गरेर आन्दोलनलाई चर्काएका छन् ।
चिकित्सक र विद्यार्थीबाहेक डा. केसीको आन्दोलनमा अनशन सुरु गरेको दोस्रो दिनदेखि नै सडक प्रदर्शन र सरकारी गाडी चल्न नदिने कार्यक्रम जारी राखेका छन् । १६औ अनशन पूर्वी नेपालको इलामबाट सुरु गरेका डा. केसीले १७औ अनशन सुदूरपश्चिमको डढेल्धुरामा जारी राखेका छन् । डा. केसीले योपटक इलामका स्थानीयले जस्तै सुरुरपश्चिमका नागरिकले साथ र ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।
यद्यपि सरकारले डा. केसीका माग सुरुवाईका लागि वार्ता प्रक्रियासमेत थालनी गरेको छैन् । बार्ताको विकल्पमा शिक्षामन्त्री स्वयम् अनुत्तदारी रुपमा डा. केसीमा माग पूरा हुननसक्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।